IMarvel's 'Blade' Ithola Umqondisi Wayo, May Feature Wesley Snipes - iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo IMarvel's 'Blade' Ithola Umqondisi Wayo, May Feature Wesley Snipes
IMarvel's 'Blade' Ithola Umqondisi Wayo, May Feature Wesley Snipes
by UTrey Hilburn III July 19, 2021
by UTrey Hilburn III July 19, 2021 982 ukubukwa
Siqonde enqwaba yezenzo ezahlukahlukene nokudideka kungekudala. Lokhu kuzoholela ekubeni amaqhawe amakhulu avela kwamanye amagatsha eMarvel angene futhi agqagqanise i-Marvel Cinematic Universe yamanje. Lokho kuzoletha okwedlule U-spider man Abalingisi kuTom Holland U-spider man nokunye okunjalo. Manje, siyazi ukuthi uWesley Snipes naye angabuyela ezicathulweni zakhe ze-Daywalker entsha Blade inkanyezi UMahershala Ali. Vele lokho kuvusa amahemuhemu amade okukhulelwa aqhubekile selokhu kumenyezelwe ukuqala kabusha kweBlade. O, futhi Blade usethole nomqondisi wayo.
UBassam Tariq uzothatha izintambo njengomqondisi wazo zonke izinyathelo ezintsha zokuzingelwa kwama-vampire. UTariq uqondisiwe UMogul Mowgli kamuva nje. Ungumqondisi onombono, kepha umqondisi ngokumangazayo akanalo uhlobo lwempendulo ongalindela kumuntu osazothatha isenzo esikhulu kanye nama-vampire amakhulu.
Igama likaWesley Snipes liphinde lavela endaweni yokuhleba yokubuyela kuyo Blade eceleni UMahershala Ali. Lokhu kube yindawo yokuqhutshwa kwamahemuhemu eqhubekayo esebenza kanzima. Ihambe yabuyela emuva isikhashana manje. Kepha, ngokuhlukahluka kuthatha ingxenye enkulu yomhlaba eqhubeka esigabeni esizayo seMarvel. UWesley Snipes ubuyela kokuzayo Blade ifilimu ibonakala inokwenzeka ngokwengeziwe njengoba sisondela.
Ngakho lapho sinakho. Umqondisi we Blade inkanyezi UMahershala Ali. Futhi kungenzeka, kuthathe ngohlamvu lukasawoti, kungenzeka ukuthi uWesley Snipes angabuyela eDaywalkin 'nase-slayin',
Ngabe nina bantu nicabangani ngokukhethwa komqondisi? Futhi, ucabangani ngamathuba okubuyela kweSnipes? Sazise esigabeni sokuphawula.